Artista Rosiana Mpanao Fampisehoana, Notànana Noho Ny Nandrehetany Ny Foiben’ny Sampana Fiarovana Federaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2015 1:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Türkçe, Français, Español, English
Ilay artista mitsangana eo anoloan'ireo varavarana mirehitra no sady alaina sary ny hetsika. Dikasary avy tamin'ny lahatsary tao amin'ny Vimeo.
Petr Pavlensky, Rosiana artista mpanao fampisehoana, notànana noho ny ahiahy ho mpanimba zavatr'olona taorian'ny nandoroany ireo varavaran'ny foiben'ny Sampana Fiarovana Federaly (FSB) tao Lubyanka, Maosko.
Pavlensky, fantatra amin'ny seho kanto manaitra ary indraindray taokanto manafinthina, tratra an-tsary sy voarakitra anatinà lahatsary iray ahitàna azy mitazona daban-tsolika ary mandrehitra ny iray amin'ireo varavarana fidirana amin'ireo biraon'ny FSB. Nalefa tao amin'ny Vimeo ilay lahatsarin'ilay zava-bitany.
Nalefan‘ilay mpitoraka bilaogy Rosiana, Ilya Varlamov, ihany koa ireo sary avy tamin'ilay hetsika, ary haingana ihany dia efa nanenika ireo media sosialy.
Araka an'i Pavlensky, endriky ny ady amin'ireo “fomba mampihorohoro tsy miato” ataon'ny Sampana Fiarovana Federaly, ilay hetsika (nampitondrainy ny lohateny hoe “Ilay Fandrahonana”) . Nantsoin'ilay artista ho “fonon-tànana atoraky ny fiarahamonina eny amin'ny tavan'ny fandrahonana mampihorohoro” ataon'ny FSB, ireo zavatra nataony.
Notazonina niaraka tamin'i Pavlensky ihany koa ireo mpanao gazety Vladimir Romenskiy sy Nigina Beroeva izay naka sary ilay fampisehoana, fa navotsotry ny polisy kosa taty aoriana.
Na sosotra tamin'ilay zava-bita, na nankasitraka tsara ilay izy ireo mpampiasa media sosialy, mamerina ny fihetseham-po mifanipaka tanteraka matetika amin'ireo zavatra ataon'i Pavlensky.
- Nahoana ny FSB-nareo no mirehitra?
– Artista aho, izany ny fomba fijeriko.
Mety hoe zavakanto maoderina mankamin'ny fety taloha io (jereo ny Herostratus), fa tsy politika izany. Ary tsy hetsi-panoherana mihitsy koa.
Dmitry Gudkov, Solombavambahoaka Rosiana (avy amin'ny antoko Rosia Iray Monja), nanoratra lahatsotra voantsaisaina tao amin'ny Facebook ho mampiseho ny fihetsehampony, izay nijereny ny anton'ilay hetsika, ny fihetsehampon'ny fiarahamonina amin'izy io, ary hoe inona no mety dikan'io amin'ny hoavin'ny hetsi-panoherana Rosiana Russiana sy ny fanjakana Rosiana.
Hilaza teny vitsivitsy momba ny zavatra vaovao nataon'i Pavlensky ihany koa aho. Voalohany, voasaina tsara daholo ilay izy: ny fotoana hoe Alatsinainy maraina, manome ireo media ny vaovao lehibe ho azy ireo, ary ny sarin'ny endrika miaraka amin'ilay afo ery aoriana. Amin'ny maha kanto azy, tena tsy misy kianina ilay izy, tsy ilàna fanazavàna.
Ary faharoa, tena farak'izay ratsy ny zavatra rehetra. Eritrereto hoe i Pavlensky mivoaka ny maraina mankany amin'ny Foiben'ny FSB miaraka amin'ny takelaka hanao fitokonana ataon'olon-tokana. Tsy misy hahamarika izany, satria maro tsy voaisa ireo mpitokona nandeha irary efa voatàna ao afovoan-tanàna [Maosko] io volana lasa io fotsiny, “tsy nandrenesam-peo na vovoka.” Ary satria tsy mety ny hetsi-panoherana tsotra, nanomboka nirehitra ireo varavaran'ny FSB. Ary matahotra ny amin'io ireo rehetra hitako tao amin'ny Facebook. Tsy ny hatsaran'ny sary akory, fa ilay afo mirehitra mihitsy.
…tsy misy fomba hafa fifampiresahana eo amin'ireo manampahefana sy ny fiarahamonina. Ary namaly hafatra amin'io karazana fanamby io ny taokanto amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny teboka iray isika hoe tsy afaka manàtona ireo any ambony ny aty ambany, ary tsy te-hihaino azy ireo mandondona avy aty ambany ireo any an-tampony.